Fast nnyefe: eme prototype n'ime 5 awa
Elu arụmọrụ: kwuru nyere na 24 awa na oru nkwado na-nyere na ihe ọ bụla oge
Factory na-dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri, ụgbọ na-eri na-echekwa
Ebe ọ bụ na 2000, Shenzhen HZD Technology Co., Ltd. anọwo na-enye nkenke CNC machining ọrụ gụnyere mmepụta, nnyocha na mmepe ahịa n'ụwa nile. Anyị nwere a aha maka àgwà, na oge nnyefe, emebe, edozi nsogbu nkà ma na-enyere anyị ahịa na ndị kasị sie ike na oru ngo. Anyị na-enye CNC machined mmiri na prototype na Transportation, akpaaka, Alternative Engergy, Aerospace, Medical na Ike Nzipu Industries. Kwa afọ mmepụta nke anyị ngwaahịa bụ ihe karịrị nde 20 US dollar, karịa 80% e nyere na nnukwu ụlọ ọrụ si n'ụwa nile.
Communication usu ụlọ
1. Ihe nhọrọ: Al6063, 6065, 7075, etc .;
2. Mkpa ọgwụgwọ: ọxịdashọn, sandblasting;
3. Dị RoHS gburugburu ebe obibi-echebe chọrọ;
Communication n'ihu panel
Laser osise igwe laser isi ụlọ
Okwu: Nke 76, Langbei Industrial Mpaghara, Tongle Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen